Ogaden News Agency (ONA) – Madaxweynaha Zimbabwe oo Baadi-Goobaya Lacago La Dhacay.
Madaxweynaha Zimbabwe oo Baadi-Goobaya Lacago La Dhacay.
Posted by Dayr	/ November 30, 2017
Madaxweynaha cusub ee Zimbabwe Emmerson Mnangagwa ayaa saddex bilood oo damaanad ah siiyay dadka iyo shirkadaha la sheegay in ay lacago badan ka qaateen Zimbabwe, mudadaas oo haddii ay soo celiyaan aanan waxbo loo raacan doonin.
Wasiirkii hore ee maaliyadda Zimbabwe Ignatius Chombo ayaa la xidhay, waxaana lagu soo oogay dacwado musuqmaasuq ah. Bangiga dhexe ee Zimbabwe ayaa sheegay in lacag gaaraysa $2 bilyan oo doolar laga dhacay dalka, dibaddana la gaystay.
Zimbabwe waxaa gabaabsi ku ah lacagta caddaanka ah, taasna waxa ay horseeday suuq madoow oo lacagaha lagu kala iibsado. Mnangagwa ayaa sheegay in uu la dagaalamayo musuqmaasuqa, islamarkaasna dib usoo noolaynayo dhaqaalihii Zimbabwe.